Naing BSell | Item - CEO,COFFEE☕️☕️☕️☕️☕️
ေျခေထာက္ အေညာင္းေျပ စိမ္ကန္
အရည်းသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်၏ တန်းဖိုးသည် ဘယ်လောက်ကျန်းမာအောင် လုပ်ပေးနိင်သလဲ?
ယနေ့21ရာစုမှာ Quality is value for life ပါပဲ
သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ ကို ကျန်းမာအောင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့
Coffee been စစ်စစ် နှင့်အတူ လူတွဦးတနေ့တာလိုအပ်သော caffeine ဓာတ်ထက်ပို၍မပါသော အာနီသင်အပြည့်အဝပရှိသော
မိတ်ဆွေ၏ နလုံးအတွက် အပြင် ကိုယ်တွင်းအဂါများအတွင်း သွေးလည်ပါတ်မူ ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် သွေးတွင်းoxygen မြှင့်တင်ပေးနိင်လို့ ကိုယ်တွင်းအညစ်အကျေးများ သန့်ဇင်ပေးနိင်အောင်
နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပါပညာ dual phase extraction ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားလို့
Chronic diseases နင့် cancer များအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်နိင်ပါတယ်
ထို့အပြင်coffee ဟာ anti oxidation ဖြစ်လို့
ဒါကြောင့် CEO coffeeဟာ မိတ်ဆွေပေးလိုက်ရတဲ့ ငွေးကြေးထက် ပိုသောတန်ဖိုးများပေးစွမ်းနိင်လို့
ကမ္ဘာ အကောင်းဆုံးသမားတော်ဟာ ရောဂါမဖြစ်ခင်ကာကွယ်နိင်ခြင်း လဲဖြစ်တာမို့ မိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်း ကာကွယ်နိင်အောင်သတင်းကောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
Value life have good choice .
# crd by AST